အိန္ဒိယနှင့် ရုရှား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု က တရုတ်ကြီး ကို မျက်ရည်ဝဲစေပြီလား…. – Shwe Ba
အိန္ဒိယနှင့် ရုရှား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု က တရုတ်ကြီး ကို မျက်ရည်ဝဲစေပြီလား….
အိန္ဒိယ က တရုတ် ကို တိုက်ခိုက်ရန် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာနယ်မြေများ ဝေမျှအသုံးချမှု သဘောတူညီချက် ကို ဂျပန်နှင့် လက်မှတ်ရေးခဲ့ပြီးသည့်နောက် ရုရှား၊ ဗြိတိန်နှင့် ဗီယက်နမ် တို့နှင့်လည်း ရေးထိုးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်ဟု သိရှိရသည်။
အိန္ဒိယအနေဖြင့် ယခု အပတ် အစောပိုင်း က ဂျပန်နှင့် သဘောတူညီချက် လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ကာ ဖော်ပြပါ ၃ နိုင်ငံနှင့် ဆက်လက်ရေးထိုးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်နေခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ် သည်။
ရုရှားနှင့်သဘော တူညီချက် ကို အောက်တိုဘာလတွင် လည်းကောင်း ရေထိုးနိုင်လိမ့်မည် ဟု မျှော်မှန်းထားပြီး အိန္ဒိယအနေဖြင့် အာတိတ်ဒေသ ကို အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကာ လမ်းကြောင်းသစ်များဖြင့် ဖောက်လုပ်ဆက် သွယ်နိုင်တော့မည်ဖြစ်သည် ဟုဆိုသည်။
မကြာသေးမီ က အိန္ဒိယအနေဖြင့်လည်း ရုရှားအရှေ့ဘက်ဆုံး ဒေသများတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ပြုလုပ်ရန် လည်း ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပြီဖြစ်သည်။
ဗြိတိန်နှင့် ဗီယက်မ်တို့ အနေဖြင့်လည်း ဆက်လက်ဆွေးနွေးလျက် ရှိသည်ဟု သိရှိရပါသည်။
အိန်ဒိယ က တရုတျ ကို တိုကျခိုကျရနျ စဈဘကျဆိုငျရာနယျမွမြေား ဝမြှေအသုံးခမြှု သဘောတူညီခကျြ ကို ဂပြနျနှငျ့ လကျမှတျရေးခဲ့ပွီးသညျ့နောကျ ရုရှား၊ ဗွိတိနျနှငျ့ ဗီယကျနမျ တို့နှငျ့လညျး ရေးထိုးနိုငျရနျ ဆောငျရှကျလကျြ ရှိသညျဟု သိရှိရသညျ။
အိန်ဒိယအနဖွေငျ့ ယခု အပတျ အစောပိုငျး က ဂပြနျနှငျ့ သဘောတူညီခကျြ လကျမှတျရေးထိုးနိုငျခဲ့ခွငျးလညျးဖွဈကာ ဖျောပွပါ ၃ နိုငျငံနှငျ့ ဆကျလကျရေးထိုးနိုငျရနျ ဆောငျရှကျနခေဲ့ခွငျးလညျးဖွဈ သညျ။
ရုရှားနှငျ့သဘော တူညီခကျြ ကို အောကျတိုဘာလတှငျ လညျးကောငျး ရထေိုးနိုငျလိမျ့မညျ ဟု မြှျောမှနျးထားပွီး အိန်ဒိယအနဖွေငျ့ အာတိတျဒသေ ကို အသုံးပွုနိုငျမညျဖွဈကာ လမျးကွောငျးသဈမြားဖွငျ့ ဖောကျလုပျဆကျ သှယျနိုငျတော့မညျဖွဈသညျ ဟုဆိုသညျ။
မကွာသေးမီ က အိန်ဒိယအနဖွေငျ့လညျး ရုရှားအရှဘေ့ကျဆုံး ဒသေမြားတှငျ ရငျးနှီးမွုပျနှံမှု ပွုလုပျရနျ လညျး ထုတျပွနျကွညောလိုကျပွီဖွဈသညျ။
ဗွိတိနျနှငျ့ ဗီယကျမျတို့ အနဖွေငျ့လညျး ဆကျလကျဆှေးနှေးလကျြ ရှိသညျဟု သိရှိရပါသညျ။